BLACK HOLE | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
Stephen Hawking -11
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း -11 စကြ၀ဠာနှင့် ပတ်သက်၍ “Why is the universe the way it is?” ဟူသော မေးခွန်း ပေါ်ခဲ့ဖူးလေသည်။ စကြ၀ဠာသည် ယခု သူဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေမျိုး ဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသနည်း? ဟူသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ၄င်းကို Anthropic Principle ဟုခေါ်သည်။ အထက်ပါ မေးခွန်း၏ အဖြေမှာ – … The universe has to be more … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged BLACK HOLE	| Leaveacomment
Stephen Hawking -3
Posted on July 12, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း ဟော့ကင်းကို အင်တာဗျုးရာ၌ အချို့အချက်လေးများသည် ဟော့ကင်းဘ၀ကို သရုပ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆသည်။ ထို့ကြောင့် အင်တာဗျုးပုံကို အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ အချို့သောနေရာ၌ ဟော့ကင်းဘ၀ ပိုမို၍ သရုပ်ပေါ်စေနိုင်ရန် ရည်သန်၍ ဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ပေးထားပါသည်။ မေး။ ။ဆရာကြီး သိပ္ပံပညာရပ်တွေကို လေ့လာလိုက်စားတော့ အသစ်အဆန်း လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အခါ ၀မ်းသာ ပျော်ရွင်မှု ရှိပါသလား? ဖြေ။ ။ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ မေး။ ။ဆရာကြီးက တေးဂီတလည်း ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ရူပဗေဒသီအိုရီအကြောင်း စဉ်းစားတာနဲ့ တေးဂီတ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged BLACK HOLE, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်	| Leaveacomment